Mpanamboatra buckle namboarina tany Sina, mpamatsy, orinasa - Fitanisana - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Home > Bokotra > Bokotra vy > jaigrafy
Fehikibo fehikibo, fantatra ihany koa amin'ny fehikibo fehikibo, loha loha, loha andilany, fehikibo, vovo-dronono madio matetika, firaka zinc, vy, firaka titanium, sns.
1. Fampidirana nyjaigrafy:
2. Parameteran'ny vokatrajaigrafy:
Belt jaigrafy Manufacturers Wholesale Cheap Custom Fashion Men Metal Belt jaigrafy For Belt
nickle afaka na namboarina
akanjo / kitapo / kiraro / fehikibo
kalitao avo lenta, vidin'ny orinasa mivantana
azo zahana raha lafo ny vidiny
Fotoana fandefasana ohatra
3-7 andro avy amin'ny DHL / UPS / Fedex / TNT
100 pcs, baiko be tsy latsaky ny 500RMB ho an'ny tsirairay
1-2 herinandro amin'ny alàlan'ny rivotra, an-dranomasina na fitambarana fitaterana
Torohevitra: 1.Ny haben'ny mpanjifa, ny loko, ny fombany dia ekena avokoa, sns. 22ODM na OEM no misy. 3.Mix order dia azo ekena.
Inona no tadiavin'ny mpanjifa:
Ny fehikibo fehikibo dia azo zaraina ho karazana fehin-kibo isanandro, fehikibo karazana atody, fehikibo fehin-kibo boribory, fantsom-boaloboka karazana D, fehikibo fehikibo karazana, fehikibo fehikibo karazana, fehikibo fehikibo karazana elatra, fehikibo fampiasa amin'ny maso.
3.Torohevitra momba ny vokatrajaigrafy:
Tombony azo avy amin'ny vokatrajaigrafy:
Ny fehikibo fehikibo dia manana fampiharana marobe, misy ny fitafiana, kitapo, fehikibo, fehikibo, kofehy sy saha hafa, mitana ny anjara asan'ny contraction sy ny fifadian-kanina, miaraka amin'ny fiovan'ny The Times, nefa koa niova ho iray amin'ireo lamaody fitafiana.
F1: orinasa ve ianao na orinasa mpivarotra?
A: Eny, orinasa izahay, any Dongguan, GuangdongProvince of China.
F2: Azonao atao ve ny manaiky ireo vokatra logo manokana namboariko?
A: Eny, alefaso ny santionany na ny sarinao tany am-boalohany, avy eo wecan mandehana manamarina fampahalalana bebe kokoa momba ny antsipiriany ary koa ny vidiny tsara indrindra, ny fandefasana entana, ny layout sns mifanaraka amin'izany.
F3: Ahoana no hahazoako santionany?
A: Afaka manome santionan'ny vokatra efa misy maimaim-poana ho anao izahay. Matetika amin'ny alàlan'ny express, toy ny DHL, Fedex, UPS, TNT sns, freightcollected.
F4: Ohatrinona no aloanao amin'ny developmentitem namboarina manokana?
A: Ho an'ny entana OEM / namboarina dia ilaina ny famolavolana lasitra vaovao.
Matetika USD60 ho an'ny famolavolana, ho an'ny buckle izay miankina amin'ny fahaiza-manao sy ny habeny. Saingy ny vidin'ny bobongolo dia azo averina indray mandeha raha ny baiko rehetra azon'ny qty afaka mifanena ao anatin'ny herintaona.
A: Eny, afaka manome santionany maimaimpoana izahay. Misy santionany amin'ny famokarana mialoha, raha ilaina (fanangonana entana) ho anao ekena sy hizaha toetra. Hanomboka ny baiko raha vao manamafy anao.
F6: Mandra-pahoviana no ilaina amin'ny famokarana?
A: 7-10 andro mahazatra ho an'ny entana kely namboarina / OEM, ary 12-20 andro ho an'ny famokarana betsaka arakaraka ny qty.
F7: Inona ny fomba fandefasana?
A: ho an'ny kaomandy kely, fanaterana ho an'ny express iraisam-pirenena, toy ny DHL, UPS, DHL, Fedex sns.
Ho an'ny baiko lehibe, fandefasana amin'ny sambo na amin'ny rivotra. Na koa mety ho voarohirohy amin'ny fangatahanao.
F8: Inona ny fotoana itarihanao?
A: Ho an'ny namboarina namboarina, ny fotoana itarihantsika dia 12-15 andro. Zavatra tsy maika, azontsika atao ihany koa ny manosika sy manatitra azy ASAP